23-jir Magan galdoon oo laga soo Tarxiilay Jarmalka oo isku dal dalay Hotel uu degnaa + Sababta – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka Soomaalia23-jir Magan galdoon oo laga soo Tarxiilay Jarmalka oo isku dal dalay Hotel uu degnaa + Sababta
23-jir Magan galdoon oo laga soo Tarxiilay Jarmalka oo isku dal dalay Hotel uu degnaa + Sababta
Nin u dhashay dalka Afganistan oo 23-jir ah ayaa la sheegay inuu isku dilay Hoteel ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Kabul, kadib, markii Ninkaasi dhawaan laga soo tarxiilay Jarmalka.
Ninkaasi waxa uu ka mid ahaa ku-dhawaad 70 dhallinyaro Afgaanistan oo ay Dowladda Jarmalka u diiday Magangelyo, kuwaasi oo dib loogu celiyey dalkooda hooyo.
Marxuumka is-dilay waxa uu muddo 8 sanno ah ku noolaa dalka Jarmalka oo uu Qaxooti ahaan iskugu dhiibay. Balse la diiday in la siiyo Magangelyo Qaxootinimo.
Marxuumka oo is-dilay maalintii Talaadada ee la soo dhaafay waxaa bishan July 4-dii laga soo masaafuriyey Jarmalka, sida ay sheegeen Hay’addaha Ammaanka ee Afganistan.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jarmalka waxay xaqiijiyeen inay Dowladda Afganistan ka heleen War ku aadan in maydka mid ka mid ah Rakaabkii la socday Diyaaradii dib u soo celisay Qaxootiga Afgaanistan laga helay Hoteelkii uu ka deganaa magaalladda Kaabul.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Jarmalka, Horst Seehofer waxa uu u muuqday in hadal kaftan u maleeyey markii Talaadadii la soo dhafaay loo sheegay in mid ka mid ah 69-kii Qaxooti ee lagu celiyey Afganistan uu is-dilay.
Wasiirka oo Talaadadii la soo dhaafay u dabaaldegay 69-guuradii ka soo wareegtay Dhalashadiisa waxa uu hadalkaasi u qaatay hadal Haddiyad oo kale loogu soo beegay Dhaashadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Kumanaan Qaxooti Reer Afganistan ah ayaa laga masaafuriyey dalka Jarmalka, kuwaasi oo dib loogu celiyey dalkooda hooyo.Istish-haadan Cali Ibraahim Macalin Aadan wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii Inqimaasiyiinta ahaa ee fuliyey howlgalkii 23-kii bishan Shawaal lagu qaaday xarumaha wazaaradaha Amniga iyo arimaha gudaha ee kooxda ridada kaas oo lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan murtadiinta, laguna dhaawacay tiro intaas ka badan.
DHAGEYSO: Al-Shabaab oo soo bandhigay Magaca & Beesha mid ka mid ah raggii fuliyay Weerarkii Otto Otto